भारतबाट महाकाली नदी तरेर एक सय मजदूर नेपाल भित्रिए – Wow Sansar
तपाईसँग भएको पुरानो नोट बेच्नुस र लखपति बन्नुस्, १० लाख भन्दा बढी यी पुरानो नोटको मुल्य ? हेर्नुहोस यो माध्यम बाट बेच्न सकिन्छ
Breaking:काठमान्डूमा हुनु भएकाहरुलाई आयो अत्यन्तै डरलाग्दो खबर,कृपया ढिलो हुनुभन्दा अगाडी पढ्नुहोला
आफ्नै छोरीबाट खतरा भएको भन्दै प्रहरी कहाँ गए यी बाबु, सत्य थाहाँ पाउँदा सबैको होस उड्यो
Beraking news..कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि फेरि लकडाउन गर्ने
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने मिती तोकियो।यति चाडै आउने भयो नतिजा,पूरा हेर्नुहोस्
ओलीले प्रचण्डलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले भने,‘तपाईँ को हो ? मलाई कार्वाही गर्छु भन्ने ?’
मुख्य पृष्ठ /News/भारतबाट महाकाली नदी तरेर एक सय मजदूर नेपाल भित्रिए
भारतबाट महाकाली नदी तरेर एक सय मजदूर नेपाल भित्रिए
बैतडी- लकडाउनको समयमा अवैध रुपमा हालसम्म १०० भन्दा बढी नेपाली नागरिक महाकाली नदी तरेर नेपाल भित्रिएका छन् । बैतडी र दार्चुलामा गरी उक्त सङ्ख्यामा स्वदेश भित्रिएका हुन् । महाकाली नदीमा ट्युवमार्फत बैतडीमा ४० जना भित्रिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले बताए । सीमा सील रहेका बेला अवैध रुपमा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर उनीहरु नेपाल आएका हुन् । उनीहरु सबैलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको उनले बताए ।
दार्चुलामा पनि लकडाउनमा समयमा महाकाली नदी तरेर ७० जना भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको छ । उनीहरुमध्ये कोही महाकालीमा पौडिएर, कोही तुहिनमार्फत र कोही ट्युबमार्फत स्वदेश भित्रिएका हुन् । स्वेदश फर्कने सबै नेपाली मजदुर रहेको र उनीहरुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कोरोना परीक्षणपश्चात मात्रै घर पठाउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिए । भारतसँग सीमा जोडिएका बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न १५ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापना गरिएका छन् ।
लकडाउन रहेको समयमा अवैध रुपमा सीमा क्षेत्रबाट हुने वारपार रोक्न निगरानी समूह गठन गर्न थालिएको छ । बैतडीस्थित महाकाली नदीमा ट्युबमार्फत तरेर अवैध रुपमा नेपाली फर्कने क्रम नरोकिएपछि यहाँका सिमावर्ती स्थानीय तहहरुले निगरानी समूह गठन गर्न थालेका हुन् । कोरोनाको जोखिम हुनसक्ने भएकाले सीमासँग जोडिएका सबै स्थानीय तहहरुले निगरानी समूह गठन गर्न थालेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले जानकारी दिए । जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । यी स्थानीय तहहरुमा निगरानी समूह गठन गरिदैंछन् ।
ट्वीटर ह्याकिङः विशिष्ट प्रयोगकर्ताका खाता पनि असुरक्षित
प्राधिकरणको सञ्चित घाटा शून्यमा झार्दै कुलमान घिसिङ
बेलायतका बैज्ञानिकले कोरोना विरुद्धको खोपमा ठूलो सफलता हात पारेसँगै डब्लुएचओले गर्यो स्वागत
भ्याट नतिर्नेको सूचीमा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटा, अर्बपति विनोद चौधरीदेखि अभिनेत्री झरना थापा
वडा अध्यक्ष सहित १२ जना जुवाडे जुवा खेल्दाखेल्दै मोटो रकम सहित समातिए